कोरोना भाइरस संक्रमण र बाढी डुबानको जोखिममा परेका वीरगन्जवासीलाई विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा थप समस्या भएको छ । पाँच महिनादेखि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा पनि दैनिकी चलाइरहेका वीरगन्जवासीलाई बीचमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी डुबानको पनि त्रासमा नै बाँच्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पु¥याएको घरमध्ये ५५७ वटा घरहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई म्याग्दीले प्राधिकरणसँग सम्झौताअनुसार हालसम्म ५५७ जनाले आवास पुनर्निर्माण गरेको जानकारी दिए । हालसम्म निजी आवास सम्झौताअनुसार सम्पन्न गरेकाले तेस्रो किस्ताको पनि भुक्तानी भएको आयोजना प्रमुख यज्ञप्रसाद रिजालले बताए । निजी आवास पुनर्निर्माणको ५२ प्रतिशत प्रगति भएको छ, भूकम्पले प्रभावितअनुसार कुल लाभग्राही १ हजार ६५ जना थिए, ९५० जनाले सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगेका छन्, दोस्रो किस्ता ६२५ जनाले सम्झौताअनुसार लगिसकेको आयोजना प्रमुख रिजालले जानकारी दिए । कुल लाभग्राहीमध्ये ११५ जना सम्झौता हुन बाँकी छन् ।
जुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट जोड्ने दानसाँघु पक्की पुलको निर्माणकार्य ९ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । तिलाजवा नदीको दानसाँघु दोभानमा २०६८ साल असार १५ गतेदेखि निर्माणकार्य थालनी भएको थियो भने ६० मिटर लम्बाइको उक्त पक्की पुल २०७१ असार मसान्तसम्म ४ वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण ५ वर्ष ढिला भएर २०७७ असारमसान्तमा निर्माणकार्य सम्पन्न गरिएको हो । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर हरिप्रसाद शर्मा बहाल हुँदा ५० प्रतिशत काम भइसकेको पुलको डिजाइन फेल भयो । जसका कारण
म्याग्दीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा संघ र प्रदेश कार्यालयबाट विकासतर्फ ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा पूर्वाधारतर्फको बजेट निकासा संघ र प्रदेशको ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च निकास तेस्रो चौमासिकको असारमा भएको कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
लामो समयदेखि चर्चित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंगिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी गतअसार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी ‘आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड’ सँग सम्झौता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ऊर्जातर्फको कुल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रहेकोमा ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ वार्षिक प्रगति ६१. ४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८. ३६ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वार्षिक प्रगति वित्तीयतर्फ ५६.७० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७२. ३० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिकसम्ममा भने वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ सोही अवधिमा भौतिक प्रगति ७१.७९ र वित्तीय प्रगति ७१.६७ प्रतिशत भएको छ ।